Clinton iyo Trump oo Guulo Weyn Gaaray
Hillary Clinton ayaa ku guuleysatay doorashooyinkii ka dhacay afar gobol, halka Trump uu ku guuleystay saddex gobol.
Musharaxa madaxweynaha xisbiga Jamhuuriga Mareykanka Donald Trump, ayaa ku guuleystay doorahsooyinkii ka dhacay saddex gobol, oo uu ku jiro gobolka muhiimka ah ee Florida, isaga oo ku qasbay Senator Marco Rubio inuu tartanka ka haro.
Gobolka kaliya ee Trump looga adkaaday waa gooblka Ohio, oo uu ku guuleystay barasaabka gobolka John Kasich.
Ganacsade Trump ayaa gobolka Florida uga guuleystay Rubio 19 dhibcood, hase yeeshee guulihii uu ka gaaray gobollada North Carolina iyo Illinois oo dirqi ahaa, ayaa ka dhigaya in senator Ted Cruz uu qeyb ka heli doono wufuudda.
Dhinaca xisbiga Dimoqraadigana, Hillary Clinton ayaa ku adkaatay afar gobol oo kala ah Florida, Ohio, Illinois, iyo North Carolina, waxayna ku dhowdahay inay kusoo baxdo magacaabista xisbiga Dimoqraadiga.
Senator Bernie Sanders oo la loomaya Clinton ayaan wax gobol ah xalay ku guuleysan.
Gobolka Missouri, ayaan weli la ogeyn cidda ku adkaatay, maadaama labadii tartan ee dimoqraadiga iyo jamhuurigaba si aad ah la isugu dhow yahay, waxaase wax ka yar hal dhibic ku kala horeeya Clinton iyo Trump.
Puntland oo Eedeysay Dowladda Soomaaliya
Gedo: Al-Shabaab oo Afduubtay Shaqaale Gargaar
Maleeshiyada Al-Shabaab oo ka Baxay Garacad
Warar Sheegaya in Shabaab ay Gaareen Bandar Bayla
Madeira oo ka Digay Halista Al-Shabaab ee 2016